Markab loo dirayo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan Yemen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 31 May 2015 31 May 2015
Mareeg.com: Wasiirarda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir “Maareeye” iyo Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka, Sahro Maxamed Cali Samatar ayaa sheegay in markab uu ku deeqay ganacsade Soomaaliyeed oo soo daad gureynaya qaxiitiga ku xayiran Yemen uu horay usii qaadayo raashin iyo dawo si dadka loo caawiyo marka lasoo saaro markabkaaas.
Maxamed Cabdi Xayir “Maareeye” oo ugu horeyn la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in uu jiro markab uu ganacsade Soomaaliyeed ku yaboohay in lagu soo daad gureeyo Qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen ku sugan, kaasi oo uu sheegay in iminka la rarayo oo la saarayo raashin, biyo iyo dawooyin, si dadka la soo qaadayo ay u helaan gurmad dhan waliba leh.
“Waxaa jirta in ganacsade Cabdi Faarax uu dowladda ugu yaboohay markab, lagu soo qaado muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Yemen ku xaniban, waxaana uu soo qaadayaa 2,300 (Labo kun iyo saddex boqol) oo qof labo jeer ayuuna ku laabanayaa Yemen, si uu mar labaad u soo qaado inta kale ee ku harsan dalkaasi, waxaana markabka raacaya suxufiyiin, dhaqaaatiir iyo howlwadeenno kale” ayuu yiri Wasiir Maareey.
“Waxaa jirta in ay xaalado adag ku nool yihiin dadkii horey ugu soo barakacay magaalada, runtii roobabkii ka da’ay caasimadda saameyn ayay ku yeelatay qoysas badan oo u baahan in gurmad beni ‘aadannimo loo fidiyo” ayuu sidoo kale yiri Maareeye..
Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo xuquuql insaanka ee Xukuumadda Soomaaliya, Sahro Maxamed Cali Samatar ayaa sheegtay in dadka dib dalkooda loogu soo celinayo ay ku jiraan qaxooti u dhashay dalka Yemen, kuwaasi oo ay sheegtay in xilligan bulshada looga baahanyahay inay gurmad u fidiyaan, maadaama kolkii hore ay soo dhaweeyn u sameeyeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Yemen u carartay.
Muungaab: Tirakoobka saxda ah ee dadka Muqdisho ayaan soo saari doonna